China High Chlorinated Polyethylene (HCPE) mpanamboatra sy mpamatsy |Dehua
High chlorinated polyethylene (HCPE), izay vokatra mihinjitra amin'ny chlorinated polyethylene (CPE), dia karazana akora simika tsara sy fitaovana polymère synthetic miaraka amin'ny fampisehoana ambony.
Ny polyethylene avo lenta dia novokarin'ny polyethylene manokana amin'ny alàlan'ny chlorine lalina.
Ny votoatin'ny chlorine ao amin'ny HCPE dia azo fehezina manomboka amin'ny 58% -75% araka ny fepetra takian'ny mpanjifa, miaraka amin'ny fahombiazan'ny simika.
Mety ho levona amin'ny solvents organika amin'ny arene isan-karazany, hydrochloric etera, ketone sy esters, parritcualrly lehibe solubility amin'ny methylbenzene sy xylene vahaolana.
Ny HCPE dia manana ny fitoniana simika avo lenta mifototra amin'ny saturation ny firafitry ny molekiola miampy ny atôma klôro be dia be, izay coating tsara sy sarimihetsika mamorona resin sy adhesive resin,
Ny HCPE dia manao ny coating mora mamorona sarimihetsika, fanoherana ny menaka, fanoherana ny ozone, ny taratra ultraviolet, ny fanoherana simika, ny fanoherana ny asidra, ny fanoherana ny alkali, ary ny fahaiza-manaon'ny taratra ultraviolet tsara, tsy misy fanehoan-kevitra amin'ny sira tsy ara-organika, ny afo retardant, ny tsy fahampian'ny rano sy ny etona. , mando chlore entona fanoherana, CO2, SO2, H2S, hafanana hafanana tsara izay handrava rehefa hafanana mihoatra ny 130 mandritra izany dia mamoaka HCL,
Azo tehirizina eo ambanin'ny mari-pana ara-dalàna izy io, manana hery adhesive avo amin'ny tampon'ny vokatra vy sy simenitra, ary ampiasaina betsaka amin'ny panit sy adhesive anti-corrosive manokana.
Fampiharana ny HCPE
1. Loko manokana miady amin'ny haromotana: loko an-dranomasina, loko fitoeran-javatra, primer manohitra ny harafesina, loko manohitra ny harafesina, loko anti-corrosive, varnish anti-corrosive, enamel lacquer anti-corrosive, loko anit manimba sy harafesina, loko aesthetika manohitra ny harafesina, loko mavesatra (tetezana, rafitra vy, milina simika, orinasa sira, milina fanjonoana), sodina coating sns.
2.Fire retardant loko, lelafo retardant loko, coating ho an'ny ivelan'ny hazo sy ny rafitra vy.
3. Fametahana trano, fametahana trano voaravaka, loko vita amin'ny simenitra ivelany.
4. Loko fanamarihan'ny lalana: hosodoko ho an'ny seranam-piaramanidina, hoso-doko marika amin'ny lalan-kely, hoso-doko marika amin'ny lalana ary hoso-doko mirefotra ho an'ny lalana.
5.Adhesive: ampiasaina indrindra amin'ny famatorana vokatra pvc isan-karazany toy ny PVC sodina PVC Fittings, PVC profil.
6. Azo ampiasaina ho fitaovana tany am-boalohany amin'ny ranomainty sy adhesives izy io.
7. Azo ampiasaina ho toy ny lelafo retardant mpandraharaha amin'ny taratasy sy ny fibre saha, hafanana-mahatohitra modifier amin'ny adhesive ho an'ny fingotra vokatra (ny tena votoaty dia neoprene), modifier amin'ny ranomainty ho an'ny taratasy sy ny aluminium foil.
HCPE dia fitaovana fanamboarana sarimihetsika tena tsara ho an'ny loko anticorrosive manokana, izay manana ny tombony amin'ny fampiasana fotoana maharitra, maina haingana, tsy misy fetra amin'ny mari-pana, singa tokana, tsy misy poizina, sns.
Viscosité, Mpa.s (20% Xylene, 25 ℃)
<15 >15,<60 >70 Viscometer rotational
Ny votoatin'ny chlorine,%
58-75 58-75 58-75 Avy amin'ny Mercuric nitrate Volumetric
Thermal decomposition mari-pana ℃ ≥
120 120 120 Afanaina amin'ny fandroana menaka
0.2 0.2 0.2 Maina tsy tapaka mari-pana
Vovoka fotsy Fijerena maso
Tsy misy akora tsy mety levona Fijerena maso
Fiarovana sy fahasalamana
Ny HCPE (High Chlorinated polyethylene) dia vokatra simika madio tsy misy caron tetrachloride sisa tavela ary tsy misy fofona, tsy misy poizina, lelafo, maharitra ary tsy manimba ny vatan'olombelona.
Fonosana, fitahirizana ary fitaterana
20 + 0.2kg / kitapo, 25 + 0.2kg / kitapo,
Kitapo ivelany: kitapo vita amin'ny PP.
Kitapo anatiny: sarimihetsika manify PE.
Ity vokatra ity dia tsy maintsy tehirizina ao amin'ny trano fanatobiana maina sy ventilated mba hisorohana ny tara-masoandro, ny orana na ny hafanana, tokony ho entina ao anaty fitoeran-drano madio ihany koa, ity vokatra ity dia karazana entana tsy mampidi-doza.
teo aloha: Fingotra misy chlorinated (CR)
Manaraka: Emulsion Plastic entin-drano sy fingotra loko roa